ISIOKWU TETA! A Olee Uru Ịmụ Baịbụl Ga-abara Gị?
BAỊBỤL NA-AGBANWE NDỤ NDỊ MMADỤ Ajụjụ Atọ Gbanwere Ndụ M
A CONVERSATION WITH A NEIGHBOR Olee Ihe Mere Anyị Kwesịrị Iji Na-echeta Ọnwụ Jizọs?
GỤỌ NKE Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Toba) Bicol Bulgarian Cakchiquel (Central) Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Krio Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Maltese Mam Mambwe-Lungu Maya Mazatec (Huautla) Mixe Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele (Zimbabwe) Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanian Runyankore Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Vietnamese Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Ụlọ Nche | Eprel 2015
ISIOKWU ỤLỌ NCHE A | Ị̀ GA-ACHỌ ỊMỤ BAỊBỤL?
Gịnị ka m kwesịrị iji ndụ m eme?
Gịnị mere ndị mmadụ ji na-ata ahụhụ ma na-anwụ anwụ?
Olee otú ihe ga-adị n’ọdịnihu?
Ihe banyere m ọ̀ na-emetụ Chineke n’obi?
Ò nwetụla mgbe ị jụrụ onwe gị ụdị ajụjụ ndị a? Ọ bụrụ na o nwetụla, ọ bụghị naanị gị ka ụdị ajụjụ ndị a na-echu ụra. Ọtụtụ ndị nọ n’ebe dị iche iche n’ụwa na-ajụ ajụjụ ndị a. Ma, ị̀ ga-amatali azịza ha?
A jụọ ọtụtụ ndị, ha ga-asị “ee.” Olee ihe mere ha ga-eji asị “ee”? Ọ bụ n’ihi na ha amatala ọtụtụ azịza ajụjụ ndị na-echu ha ụra na Baịbụl. Ị̀ ga-achọ ịma ihe Baịbụl na-akụzi? Ọ bụrụ na ị ga-achọ, gbalịa ka gị na Ndịàmà Jehova malite ịmụ Baịbụl. * Ha agaghị ana gị ego maka ihe unu ga-amụ.
Ma, a sị ụfọdụ ndị bịa mụọ Baịbụl, ha asị na ha ji ihe n’aka, ma ọ bụ na Baịbụl siri ike ọmụmụ, ma ọ bụkwanụ na ike Baịbụl adịghị ha. Ma, o nwere ndị na-anaghị ekwu otú ahụ. A sị ha bịa mụọ Baịbụl, ha abịa ozugbo. Lee ihe ụfọdụ n’ime ha kwuru:
Otu nwaanyị onye Ingland aha ya bụ Gill kwuru, sị: “Ekpeela m Katọlik, kpee Anglịkan, kpee okpukpe ndị Sik, kpee nke ndị Buda, gụọkwa gbasara okpukpe na mahadum. Ma, amatalighị m azịza ajụjụ ndị m na-ajụ gbasara Chineke. Ma, otu ụbọchị, otu nwaanyị Onyeàmà Jehova bịara ozi ọma n’ụlọ m. Otú o si jiri Baịbụl zaa m ajụjụ niile m jụrụ ya mere ka m kweta ka mụ na ya mụwa Baịbụl.”
Otu nwoke onye Bene Ripọblik aha ya bụ Koffi kwuru, sị: “Ajụrụ m pastọ anyị ọtụtụ ajụjụ ndị na-echu m ụra, ma ihe ọ zara m ejughị m afọ. Ma, mgbe m jụrụ otu Onyeàmà Jehova ajụjụ ndị ahụ, o ji naanị Baịbụl zaa m ha niile. Mgbe ọ jụrụ m ma m̀ ga-achọ ịmatakwu ihe ndị ọzọ dị na Baịbụl, ekwetara m ozugbo.”
Otu nwoke onye Brazil aha ya bụ José sịrị: “M chọsiri ike ịma ọnọdụ ndị nwụrụ anwụ. Ekweere m na ndị nwụrụ anwụ nwere ike imesi ndị dị ndụ ike, ma achọrọ m ịma ihe Baịbụl kwuru. M bidoziri soro otu enyi m bụ́ Onyeàmà Jehova mụwa Baịbụl.”
Otu nwaanyị onye Meksiko aha ya bụ Dennize kwuru na ya agbalịala ịgụ Baịbụl, ma o kweghị ya nghọta. Mana ọ sịrị na otu ụbọchị Ndịàmà Jehova bịara ozi ọma na nke ya, ha kọwaara ya ụfọdụ amụma ndị dị na Baịbụl, ha edoo ya anya, nakwa na o mere ka ya chọwa ịmata ihe ndị ọzọ dị na Baịbụl.
Otu nwaanyị onye Nepal aha ya bụ Anju kwuru, sị: “Ọ na-eme m obi abụọ ma ihe banyere m ọ̀ na-emetụkwa Chineke n’obi. M gwara ya Chineke n’ekpere. N’echi ya, Ndịàmà Jehova bịara na nke m. Mgbe ha gwara m na ha ga-achọ ka mụ na ha mụwa Baịbụl, m kwetakwara.”
Ihe a niile ndị mmadụ kwuru na-echetara anyị otu ihe Jizọs kwuru na Baịbụl. Ọ sịrị: “Obi ụtọ na-adịrị ndị maara mkpa ime mmụọ ha.” (Matiu 5:3) N’eziokwu, Chineke kere anyị ka ọ na-agụ anyị agụụ ịma gbasara ya. Ọ bụkwa naanị ya ga-emeli ka anyị mata onye ọ bụ. O ji Okwu ya bụ́ Baịbụl eme ka anyị mata ya.
Oleezi otú Ndịàmà Jehova na ndị mmadụ si amụ Baịbụl? Olee uru ịmụ Baịbụl ga-abara gị? A ga-aza ajụjụ ndị a n’isiokwu na-eso nke a.
^ para. 8 Baịbụl kwuru na aha Chineke bụ Jehova.
IHE ỤFỌDỤ GBASARA BAỊBỤL
AHA YA: E si n’okwu Grik bụ́ bi·bliʹa, nke pụtara “akwụkwọ nta dị iche iche,” nweta okwu ahụ bụ́ Baịbụl
AKWỤKWỌ NDỊ DỊ N’IME YA: Baịbụl nwere akwụkwọ iri atọ na itoolu e dere n’asụsụ Hibru (mana, e nwekwara ebe ụfọdụ e dere n’asụsụ Arameik), nweekwa akwụkwọ iri abụọ na asaa e dere n’asụsụ Grik
NDỊ DERE YA NA OGE O WERE HA: Ọ bụ ihe dị ka mmadụ iri anọ dere ya. O were ihe dị ka otu puku afọ na narị isii iji dechaa ya. A malitere ide ya n’afọ 1513 Tupu Oge Ndị Kraịst ma dechaa ya n’ihe dị ka n’afọ 98 Oge Ndị Kraịst
OLE E KESARALA YA: E kesaala ihe dị ka ijeri Baịbụl anọ. O nweghị akwụkwọ ọzọ e kesarurula otú ahụ
Eprel 2015 | Ị̀ Ga-achọ Ịmụ Baịbụl?
ỤLỌ NCHE Eprel 2015 | Ị̀ Ga-achọ Ịmụ Baịbụl?